Izindaba - Amaqiniso Athandekayo Ngonyaka Omusha WamaShayina
1, Usuku lokuqala lwenyanga yokuqala yokuthwasa kwenyanga lwalungabizwa ngoMkhosi Wentwasahlobo ezikhathini zasendulo, kepha lwalubizwa ngosuku lukaNcibijane.
2, Emlandweni waseChina, igama elithi "Umkhosi Wentwasahlobo" akuwona umkhosi, kepha ukubhekiswa okukhethekile kokuthi "Ukuqala Kwentwasahlobo" kwamagama angama-24 elanga.
3, Umkhosi Wentwasahlobo uvame ukubhekisa ekuqaleni konyaka wamaShayina wenyanga, okungukuthi, usuku lokuqala lwenyanga yokuqala yenyanga. Umkhosi wasentwasahlobo wamaShayina ngomqondo wawo obanzi ubhekisela osukwini lwesishiyagalombili lwenyanga yeshumi nambili yenyanga, noma inyanga yeshumi nambili yenyanga 23, 24, kuze kube usuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yokuqala yenyanga..
4, Yize uMkhosi Wentwasahlobo kuyisiko elijwayelekile, kepha okuqukethwe kulo mgubho kuhlukile nsuku zonke. Kusukela ngosuku lokuqala kuze kube usuku lwesikhombisa, usuku lwenkukhu, usuku lwenja, usuku lwengulube, usuku lwezimvu, usuku lwenkabi, usuku lwehhashi nosuku indoda.
5, Ngaphezu kweChina, kunamanye amazwe amaningi emhlabeni agubha uNyaka Omusha We-Lunar njengeholide elisemthethweni. Yilezi: INingizimu Korea, iNorth Korea, iVietnam, iMalaysia, iSingapore, i-Indonesia, iMauritius, iMyanmar kanye neBrunei.